Kancinci malunga nomnqophiso waseMarrakesh: Kutzooi! : UMartin Vrijland
Ndiyazi, ndihamba ngokukhawuleza, kodwa ndandifuna ukuvumela ukuba i-hype ihambe. Kwiiveki siye sahlwaywa ukuba siyeke umnqophiso waseMarrakhishe kwaye konke kuyaqhubeka. Siye sazi ukuba ngaphambili. Ngethamsanqa sinokukhetha ukhetho lokuqala kwi-Forum yeDemokhrasi kwaye ke konke kusebenza! Emva koko igumbi lokuqala liyeka nje.
Ziyintoni na eziya kumisa? Andizi. Andizange ndingene kulo mbandela ngale ndlela. Xa kukho imbonakalo eninzi yezopolitiko, sele usuyazi ukuba sele isilungele ixesha elide, kodwa ukuba yinto embalwa nje yokulwa nemidlalo inokudlalwa ngeendaba. Ngabamelwane bethu abasemzantsi a isepha efanayo zihleli. Ukuba uMarrakesh umnqophiso ngento ethile nabantu abavela kumazwe akude anokungena nje, akunjalo? Ukuba nje ndandiphulaphule uTeerry Baudet, wayenokuzichazela konke kwaye ndibe ndichasene nalo!
Abanye ba phambili. Abanye babheka 'Ihlabathi lihamba'. Akukho nto esiyifumanayo noko sivotelayo, nini esiya kubona oko!
Urhulumente wehlabathi uyaba yinyaniso. I-Brussels kunye ne-UN baqhubeka becinga isigqibo kwaye kuphela abenzi bexinzelelo kwizopolitiko zesizwe basinika ingcamango yokuba baya kuhlangula ukusikhusela. Siye sabona ukuba e-Nigel Farrage yeqela le-UKIP e-United Kingdom. Ngethuba eliphambili umntu ohamba phambili ugqiba emva kokuphumelela kokhetho lukaBrexit ukuba akuwona umsebenzi wakhe wokukhokela ilizwe kwi-EU. Emva koko kufika uhlobo lwe-Hyacinth Bucket leyo ngokuthi ngokusebenzisa i-Keeping Appearances yenza sengathi i-Brexit iphumelele ngokwenene, kodwa ukususela ngomhla we-1 ndiyaxela ukuba i-Brexit ithetha ukuthambisa. Kuyinto enamandla ukubonisa abantu ukuba ubuzwe nokukhuseleka akusebenzi. Idemokhrasi ayizange isebenze. Kubonakala nje ngentando yesininzi, eyenziwa ngabapolitiki kunye neendaba, ezimele zigcine abantu bengenanga.
AbePolitiki abayena nje abadlali abafanele bagcine umfanekiso wokuphupha 'wokulawula' kunye 'negalelo' ephakamileyo, ukuze wena-abantu - uhlale kwindlela yokuziphatha kwaye uqhubeke ulindele ukutshintsha okuvela phezulu. Amajelo eendaba kunye nolunye uhlobo lweendaba ezondla ithemba.
Namhlanje sineCafé Weltsschmertz (andinakukhumbula ukuba ubhala ntoni, kodwa yinto ethile kunye neyokugqibela ekupheleni) ukuze ubambe iingcamango ezibalulekileyo. Sifanele siqhubeke sijonge kwizikrini kwaye sinethemba lokuba kukho abantu abanezilumko abaza kuwukhetha ukuze baphakamise kunye nezopolitiko okanye ngubani oya kwenza inkululeko entsha yezopolitiko. Kwaye ke siyaqhubeka sithembele ekusebenziseni inkqubo engazange isebenze ngaphambili, kodwa siyaqhubeka nokuhamba kwiipota. Ingcambu iya phambili phambi kwesizukulwana ngokuphindaphindiweyo kwaye sinethemba lokufumana encinane, kodwa ingcambu iyahamba kunye nentshukumo.
Utshintsho lwangempela kwihlabathi aluveli kubapolitiki, kwiimidiya okanye kwezinye iindaba. Utshintsho olwenene luvela ngaphakathi. Oku kuqala kuwe kwaye kungekhona kunye noT Thierry Baudet, abathengi beesilumko kwiingcali ezintsha ze-intanethi okanye abaqhubi abaqalisa isantya esitsha.
Utshintsho lwangempela luqala kuwe. Oko kuqala ngesimo sakho sengqondo ebomini kwimpilo yakho yansuku zonke. Ingaba ungumntu osebenza rhoqo kwindlela yokuphila ngokwenene unceda ukugcina inkqubo yepiramidi? Ngaba ukholelwa ngasese kwizopolitiko? Ngaba ukholelwa ukuba iinkqubo esizakhele zona kakuhle, kodwa zifuna kuphela ukulungiswa okuncinci kubantu abaya kuyenza ngokuhlukileyo (kodwa akayi kuyenza)? Okanye ukholelwa ukuba lixesha lokuba uya kuzisa utshintsho. Idemokhrasi, ukukhohlisa okukhethiweyo ngokusebenzisa iinkonzo zokhuseleko ezihlala zihlala zibuyisele kule ngcambu yokholo nethemba, ayiyi kuba. Yonke into iqala nawe. Vumela amandla akho aphephe kwakhona kwakhona; Ngaba uhamba emva kwenkokeli entsha okanye upolitiki okanye uya kutshintsha ikhosi kwindawo yakho ngqo? Utshintsho lwangempela luvela kwingundoqo yakho; akuveli kwintsimbi ephuzi kwaye engekho emnqamlezweni kwivoti.
Indlela yodwa yokufikelela kumthombo ukuguqula ngoku ngoku.
Uludwe lwekhonkco lovimba: nieuwsblad.be
"Hlala kude nabantu ababi, banenkinga kwisisombululo" i-Facebook hype
URonald Bernard udideki kunye nokuba yintoni na
Ingxaki yamaSilayam enzulu kunye nembono yesisombululo kunye nemida evaliweyo
UJantje uqonde kwaye uyesaba ukuphuma kwi-closet #SorryJohan
tags: wentando, emnyango, eziziimbalasane, Forum, FvD, Marrakeki, hayi, melwano, Baudet yabo, melwano, kuba
7 Disemba 2018 kwi-03: 06
Siya phambili kuzibophelela Ukuxhasa intetho evulekileyo kunye nobungqina-ofisini kwi ukufuduka kunye nezilwanyana ezingeyonzalelwane yalapha ngokubambisana zonke iindawo yoluntu, ukuba gene amazinga bezibona yabantu ngakumbi zinjalo, kwaye nelakhayo ngokumalunga noku. ... ..c) Ukukhuthaza elizimeleyo, injongo kunye nomgangatho ingxelo amajelo eendaba, i-internet ulwazi-kuquka, zoals ngokuthi ezazisazisa nokufundisa iingcali eendaba ngemiba enxulumene imfuduko nesigama, imali kwimigangatho ingxelo yeenqobo ezisesikweni kunye neentengiso, kwaye ukuyeka ulwabiwo-mali karhulumente okanye zokuxhasa ukufunda nokufundisa amajelo eendaba ngendlela Oko Ukukhuthaza ukunganyamezelani, intiyo, ubuhlanga kunye nezinye iintlobo zocalucalulo malunga abafakwa, malunga ngokupheleleyo ukuba inkululeko eendaba ... .. Ukukhuthaza amaphulo okwazisa ayagu- ezijoliswe noluntu imvelaphi, ehambayo kunye kuyo ukuze ukwazisa iimbono zomphakathi malunga negalelo elifanelekileyo lokuhamba ngokukhuselekileyo, ngokulandelelana nangokuqhelekileyo, kwaye ngenxa yobuhlanga, ukuxhaswa kwabantu kunye nokugxeka kwabo bonke abafudukayo
8 Disemba 2018 kwi-06: 53
Imbali iphinda iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde ibuyele, iNqaba yeBabel iphantse kwiindawo zayo eziphezulu. Akusiyo into yokuba sonke sithetha iilwimi ezahlukeneyo, kukulungile ukuba neqela elincinci. Kodwa hayi, iinkokeli zethu zinzima kwaye zifuna ukwenza ihlabathi libe yidolophana enkulu (idijithali), ngolwimi, imali kunye nenkokheli. Kwakuyiminyaka emininzi edlulileyo ukuba iYurophu yangoku yenziwa idini, ngenhlanhla asikwazi ukutshintsha loo nto. Mhlawumbi inokutshintshwa kuphela xa wonke umntu ebona oko kwenzeka okokugqibela. Ihla kumntu wonke kufuneka enze ukhetho lwakhe kwaye azibonele utshintsho lwazo. Wonke umntu ucela umhlanguli obiza isithwathwa ukuba azinzileyo, kodwa kukho omnye kuphela onokuzolisa isiphepho ngaphakathi kwethu.
Ndiza kuthetha ngomoya ozolileyo neveki.
8 Disemba 2018 kwi-20: 49
Othandekayo othandekayo, sinomesiya omtsha oya kulungelelanisa yonke into kubantu abangenandaba nabahlali. Hlala ngokukodwa kwizandla zakho zombini, uncike emva kwaye kuya kuba kuhle abantu abalungileyo ..
9 Disemba 2018 kwi-14: 21
Ubomi ngokwalo bunomsebenzi, injongo ayiyona nto ibalulekileyo kodwa indlela eya kuyo.
Ukuphazamiseka nokungaziphathi kuyinkqubo yokufunda.
« Ibhokhwe enkulu yomlobi omnyama!
UAndré van Delft ungumzekelo omhle we-Inoffizieller Mitarbeiter? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.951.844
I-Turkish ikhubekisa i-Syria i-harbinger kwi-Europe
Ukupheliswa Ukupheliswa liqela labaphembeleli abahlawulwayo
Uhlobo 'lungelo' kunye nesicwangciso sobuchule sokuthengisa ngentengiso
SandinG op Ukuvukela okuphelileyo kunye nokubiza iirhafu eziphezulu kunye nolawulo olupheleleyo kuzo zonke iinkcukacha zobomi bakho
iifom op Ukuvukela okuphelileyo kunye nokubiza iirhafu eziphezulu kunye nolawulo olupheleleyo kuzo zonke iinkcukacha zobomi bakho
Amaleki op Ngaba u-Ursula von der Leyen (umongameli we-EU kamva) ngokwenene kwigazi elifanayo njengentsapho yasebukhosini yaseBritani?
Ikhamera 2 op Umlawuli weMvukelo yokuGqibela uMargaret Klein Salamon: "Inqanaba elilandelayo kukuthatha inyani ukuba yinyani"
Joyina amanye ama-1.647 ababhalisile